May Nyane: အဆိပ်အတောက်ဖြစ်နေနိုင်တဲ့ စာတစ်ပုဒ်
ကျမ ငယ်ငယ်က အဖေ့စာအုပ်စင်မှာ တွေ့သမျှ စာအုပ်တွေ ဆွဲဖတ်ရင်း ပေါ်လီယာနာ တို့ .. ထမီကျွတ်၍ လွှတ်လိုက်မည် တို့၊ မပန်ပါနဲ့ ကြွေချင်တယ်.. တို့၊ နှလုံးသားမြို့ဟောင်း တူးဖော်ချက် နောက်ဆုံး အစီရင်ခံစာ.. တို့ကနေစလို့ ၊ စစ်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး.. အရင်းကျမ်း.. အာဒိကပ္ပကျမ်း.. ဘာသာကြီးလေးမျိုးပေါ် အမြင်.. ဗုဒ္ဓ၀ါဒ ပြဿနာများ.. သိဒ္ဓတ္ထ .. ဇိနတ္ထပကာသနီ .. ဗုဒ္ဓဘာသာကောင်းတစ်ယောက်.. လာခြင်းကောင်းသောအရှင်.. ၅၅၀ ဇာတ်တော်များ လို စာအုပ်တွေအထိ အမျိုးစုံ ဖတ်ခဲ့တာမှာ ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်လေးတွေ သိလာပါတယ်။
အထူးသဖြင့်တော့ ဘုရားမရှိခိုးတဲ့.. သူများကို ပိုက်ဆံ ကူညီပြီး အလှူလို့ ကင်ပွန်းမတပ်တဲ့၊ သံဃာတော်တွေကို အလှူလုပ်ပေမဲ့ ရေစက်မချတဲ့.. ၊ နတ်ကိုးကွယ်မှုကို ဆန့်ကျင်တဲ့.. နတ်ကိုးကွယ်မယ့် အစား ကိုယ့်မိန်းမကို ကိုးကွယ်တာတောင် အကျိုး အများကြီး ရှိသေးတယ်လို့ ပြောတတ်တဲ့.. ၊ ကျနော်က မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မဟုတ်ဘူး.. ဗုဒ္ဓ၀ါဒီလို့ ပြောတတ်တဲ့..၊ ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်တက်တိုင်း ဗုဒ္ဓဟူးထောင့်မှာ ထိုင်ပြီး ငြိမ်ငြိမ်လေး ထိုင်ပြီး ရွှေတိ၈ုံစေတီတော်ကို ကြည့်နေရတာ တရားထိုင်ရသလိုပဲ စိတ်အငြိမ်းချမ်းဆုံးလို့ ပြောတတ်တဲ့ ၊ ပြီးခဲ့တာကို ချထားခဲ့.. ရှေ့ဆက် လုပ်.. ခရီးဆုံးရောက်အောင် ဇွဲနဲ့သွားဆိုတဲ့ မူကို ကြိုက်လို့ တခါတလေ ဇင် ဗုဒ္ဓ ၀ါဒီတွေက ပိုပြီး အလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ ပြောတတ်တဲ့.. အင်မတန် လက်တွေ့ကျကျ နဲ့ ဒီကနေ့ ဆိုတာကို တည့်တည့် ရင်ဆိုင်ပြီး လုပ်စရာရှိ်တာကို လုပ်သွား တတ်တဲ့၊ နောက်ဆုံးအချိန်ထိ သတင်းစာထဲထည့်ရမယ့် ကိုယ့်နာရေးသတင်း ကို ကိုယ်တိုင်ရေး ထားသွား ခဲ့တဲ့ အဖေနဲ့ ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့အပြင် အဖေက ကျမကို သားယောက်ျားလေးလို မွေးမြူခဲ့တာမို့ အဖေ့ အတွေးအခေါ် အယူအဆတွေက ကျမဆီ စိမ့်ဝင်နေခဲ့ပုံရပါ တယ်။ (အမေ့အပြောအရတော့ ကျမက အဖေနဲ့ ရုပ်ရော စိတ်ပါ အတူဆုံးသမီးလို့ ဆိုပါတယ်)
ကျမက ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဖြစ် သိပ်ကျေနပ်ပါတယ်။ သိဒ္ဓတ္ထမင်းသား နိမိတ်ကြီးလေးပါး မြင်ပြီး တရားရတာ သိပ်တော်တဲ့ မင်းသားပဲ.. ဒီအရွယ်.. ကာမဂုဏ်အာရုံထဲ ဒီလောက်နေလို့ ကောင်းနေတဲ့အချိန် ဒါဟာ သုခ အစစ်မဟုတ်ဘူး .. မမြဲဘူးလို့ မြင်တာ.. တော်လိုက်တာ.. ။ ပြီးတော့ ဆရာရှာမတွေ့ဘဲ ကိုယ့်ဘာသာ အားထုတ် ရှာဖွေရတာမို့ ၆ နှစ်လောက် လမ်းလွဲသွားရှာသေးတာ..။ ဟုတ်ပြီ .. ဉာဏ်အလင်းပွင့်ပြီလည်းဆိုရော သူသိသမျှကို ဝေငှတော့တာ..၊ ဉာဏ်မီတဲ့သူ ရပေလိမ့်..။ သူ ရှာတွေ့သမျှ ငြိမ်းချမ်းရာငြိမ်းချမ်းကြောင်းထဲ ကျမ ဉာဏ်မီ သမျှက ရလိုက်တာက သစ္စာလေးပါး၊ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး၊ ၃၈ဖြာမင်္ဂလာ၊ ၂၄ ပစ္စည်းဖြစ်စဉ်အဆင့်ဆင့် နဲ့ ပဋ္ဌာန်း အကျယ် ၊ ပြီးတော့ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း ဖြစ်ပျက်နေသမျှ နဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ အဘိဓမ္မာ.. ရပြီ။ ဒီလောက်နဲ့ ကို ဒီလို အသိတရားထူးကို ထိုးထွင်းသိမြင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ လက်ဦးဆရာ သဗ္ဗညုတပညာရှင်ကြီးကို ကျမ အမြတ်တနိုးနဲ့ ဘုရားရယ်လို့ ကြည်ညိုပြီ။
အဲဒီအခါ အကြည်ညိုလွန်သူတွေက ဘုရားရယ်လို့ ရုပ်ပွားတွေ ထုလုပ်ပြီး ကြည်ညိုကြတဲ့အခါ ၊ ကျမလည်း အဲလို အမှတ်ထား ကြည်ညိုရတာကို ကြိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ စိတ်ကူး ခပ်ယဉ်ယဉ် ကျမက ၊ ဘုရားက အိန္ဒိယနွယ်ဖွားမို့ ဒီလိုလေးနေမှာလို့ တွေးပြီး နှာတံ ချွန်ချွန် နဲ့ ..၊ ပြီးတော့ ရောင့်ရဲတဲ့အကျင့်ကို ကျင့်သူမို့ ဘုရားရှင်ဟာ ခပ်သွယ်သွယ်ဖြစ်မှာလို့ တွေးပြီး.. ပိန်သွယ်သွယ် မျက်နှာကျ လေး ပေါ်ပေါ်နဲ့.. ၊ ဘုရားရှင် ကိုယ်တော်ကြီးက.. ပကာသနဆိုတာ အဆိပ်အတောက်တွေပဲလို့ တရားပြခဲ့သူမို့ ရွှေတွေအိနေအောင် ချမထားတဲ့ (အရောင်လှပြီး သာမန်ထက်ထူးကဲကြောင်းပေါ်ရုံလေး ရွှေရောင်ဝင်းထားတဲ့.. အဲလို ဆင်းတုမျိုး တွေကို အိမ်မှာ စင်မြင့်ထက်တင်ပြီး တရိုတသေ နေရာပေး ကိုးကွယ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘုရားရှင် အချိန် ကြာကြာ သီတင်းသုံးလေ့ရှိခဲ့တဲ့ ဇေတ၀န်ကျောင်းတော်မှာတောင် သာယာငြိမ်းချမ်းတဲ့ အငွေ့အသက်ရအောင် ပန်းဥယျာဉ် ရှိတာဆိုတော့ ဘုရားရှင်နံဘေးမှာ ပန်းတွေ ဝေအောင် ကြိုးစား ဖန်တီးပါတယ်။
ကျမရဲ့ အဖွားတွေက နေ့တိုင်း မနက်တိုင်း ဘုရားရှင်ကို သက်ရှိသံဃာတော်တွေကို ဆွမ်းကပ်သလို စားပွဲဝိုင်းနဲ့ အချိုပွဲ ၊ လက်သုတ်ဝတ် ၊ ဇွန်းခက်ရင်းမကျန် ဆွမ်းကပ်ပါတယ်။ အိမ်မှာ အမြဲ ဆွမ်းခံကြွတဲ့ ထိုင်ကိုယ်တော် တွေ အနည်းဆုံး ၅ ပါးရှိပါတယ်။ ကျမ လည်း အိမ်မှာ ဆွမ်းခံကြွတဲ့ သံဃာတော် ရှိမှ စိတ်ချမ်းသာပါတယ်။ ကထိန်ဆိုရင် အများကြီး မခင်းနိုင်တော့တာတောင် အနည်းဆုံး သင်္ကန်းလှူ ဆွမ်းကပ်ချင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျမက ဘုရားရုပ်ပွားတော်ကိုတော့ ဆွမ်းမကပ်ပါဘူး။ ဒါက ကျမ အယူအဆနဲ့ ကျမပါ။ ဆွမ်းကပ်တဲ့ သူတွေက လည်း သက်ရှိဘုရားရှင်ကဲ့သို့ သဘောထားပြီး တရိုတသေ ကပ်ကြ တာပါ..။ ပြီးတော့ တန်ခိုးအာနုဘော် ရှိနေတဲ့ ရုပ်ပွားတော်ဆိုရင် ဆွမ်းစားရသကဲ့သို့ ရှိမယ်ဆိုတာကို လည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ လက်ခံနိုင်ပါ တယ်။ ဒါကို ကျမ ဝေဖန်စရာ မရှိပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ အဖွားတို့က ကိုယ့်နားမှာ စားစရာမရှိတဲ့ အမျိုးတွေကိုတော့ မပေးဘဲ ရွှေတိဂုံစေတီ ထီးတော်မှာ သူတို့ရဲ့ စိတ်နားကပ်တွေ စိန်လက်စွပ်တွေ သွားချိတ်တာကိုတော့ ကျမ လက်မခံချင်ပါဘူး။ (အဖွားကို ပြောတော့ အဖွားခမျာ ကျမကို မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်မယ်ရယ်လို့ စိတ်ပူရှာပါတယ်) နောက်.. ကျွဲကော်သီးတွေ အလုံးလိုက်ကြီး ဘုရားစင်ပေါ်တင်ပြီး ဘုရားကို လှူတယ်ဆိုတော့.. ကျမက အဖွားရယ်.. ဘုရား ဘယ်လို ခွဲစားမလဲလို့ ပြောမိပါတယ်..။ ကျမသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆို ငှက်ပျောသီးအစိမ်းတွေ အဖြီးလိုက်တင်သေး.. ပြီးတော့ နောက် သုံးလေးရက်နေရင် မှည့်ပြီ.. စွန့် စားရုံပဲ လို့ ပြောသေးတာ.. တကယ်။
ပြီးတော့ ကျမက ကိုယ်တိုင် ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ် နဲ့ ပဋ္ဌာန်းအကျယ်.. ဓမ္မစကြ်ာ ဒေသနာတော် အကုန်ရပေမဲ့ ကျမရဲ့ သားသမီးးတွေကို သြကာသ နဲ့ ငါးပါးသီလက လွဲလို့ ဘုရားစာ မသင်ဖြစ်ပါဘူး။ မေတ္တာသုတ် ကိုတော့ အနှစ်သာရ ကို ကြိုက်တဲ့ အပြင် ကလေးတွေလည်း နားလည်ကောက်ယူနိုင်တဲ့ အဓိပ္ပါယ် ရှိတာကြောင့် အနက် က အစ (အချိန်တန်တဲ့အခါ) သင်ပေးဖို့ အစီအစဉ် ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ ဗုဒ္ဓရဲ့ ဖြစ်တော်စဉ်ကို သူတို့ နားလည်မယ့် စကားလုံးတွေနဲ့ သေသေချာချာ ပြောပြပါမယ်။ ဗုဒ္ဓဟာ အသိဉာဏ်ပညာမှာ အနှိုင်းမဲ့သူဖြစ်ကြောင်း..၊ အဲဒီပညာကြောင့် ရှာတွေ့လာတဲ့ အယူအဆ က ကောင်းလွန်း.. ပြည့်စုံလွန်း.. စိတ်အေးချမ်းရလွန်းလို့ လိုက်နာကျင့်ကြံသင့် ကြောင်း..၊ ဗုဒ္ဓက ရှာတွေ့ ထားတဲ့ လမ်းကို လိုက်နာကျင့်သုံးလို့ ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ ခေါ်တာဖြစ်ကြောင်း..၊ ပြီးတော့ ကောင်းမွန်သင့်မြတ်တဲ့ အကျင့် ၈ မျိုး (မဂ္ဂင် ရှစ်ပါး) နဲ့ သူတပါးအပေါ် ကိုယ်ချင်းစာတတ်ပြီး လောကဓံကို ရင်ဆိုင်တတ်စေဖို့မှာ အရေးပါလှတဲ့ ဗြဟ္မစိုရ်တရားလေးပါး ကို ပြောပြမယ်။ ဘာဖြစ်လို့ ကိုယ်ကျင့်တရား (၅ ပါးသီလ)က အရေးကြီးလဲဆိုတာ ပြောပြမယ်..။ အဲလောက်ကိုပဲ သားတို့ သမီးတို့ ကျင့်နိုင်အောင် မနည်း ကြိုးစား ရ မှာ လို့ ပြောပြမယ်။ သူတို့ လက်ခံယုံကြည်ရင် ကျမရဲ့ သားသမီးက ဗုဒ္ဓကို သိပြီ။ (သားကြီးကတော့ သိသင့် သလောက် သိပြီးပြီ .. သူဘယ်လို လက်ခံသဘောထားတယ်ဆိုတာ နဲ့ သူယုံကြည်တဲ့ ကိုးကွယ်မှုပုံစံက သူ့ကိစ္စ)
ပြီးတော့ သူများရဲ့ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု နဲ့ မကိုးကွယ် မယုံကြည်မှုကို ကဲ့ရဲ့တာလည်း မကြိုက်ပါဘူး..။ ပြီးတော့ ကိုယ့်ဘာာရေးကြောင့် သူများကို တနည်းနည်းနဲ့ အနှောင့်အယှက်ပေးတာ.. ထိခိုက်နစ်နာစေတာကိုလည်း မကြိုက်ပါဘူး။ ကျမအတွက်တော့ ဘုရားရယ်လို့ မဟုတ်ဘဲ အယူအဆကို ကြိုက်လို့ တရားလို ကျင့်ကြံရတာတွေလည်း အများကြီးပါ..။ ဥပမာ.. မဟတ္တမ ဂန္ဓီကြီး လူငယ်ဘ၀ ရထားစီးရင်း ဘိနပ်တဘက် ကျွတ်ကျတာမှာ နောက်တဘက်ပါ ထားရစ်ခဲ့တာမျိုးက ကျမအတွက် ကျင့်ကြံရတဲ့ တရားပဲ..။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဆီမှာဆိုလည်း ကျမ ကျင့်ကြံရမယ့် တရားတွေ အပုံ..။ John Lennon ရဲ့ Imagine ကလည်း တရားပဲ..။ Vincent Van Gogh ရဲ့ Sunflower ကလည်း တရားပဲ။ Mother Teresa ရဲ့ ပရဟိတတွေကလည်း တရားပဲ.. ။ အဲလိုတွေအများကြီးပေါ့..။ အနက်အရှိုင်း ပမာဏသာ ကွာကောင်းကွာမယ်လေ။
အဲဒီအခါ ကျမက ပတ်ဝန်းကျင်တခုမှာ နည်းနည်းတော့ ပြဿနာရှိနိုင်ပါတယ်..။ စာရေးဆရာမ ကျောင်းဆရာမ ဖြစ်လေတော့ နည်းနည်း ပိုဆိုးနိုင်တာပေါ့. နော်.. .။
Pho Lone said...
အစ်မရဲ့ ယုံကြည်မှုနဲ့ ရှုမြင်တွေးခေါ်ပုံကို သဘောကျတယ်၊ အတွင်းသားကို သေသေချာချာ သိတဲ့၊ အပေါ်ယံနဲ့ အနှစ်သာရကို ရောထွေး မသွားစေမယ့် လမ်းတွေကသာ ခရီးဆုံးကို ရောက်စေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်...၊
လပေါင်းများစွာ ကြာခဲ့ပြီးမှ ပြန်ဖတ်ရတဲ့ ဒီပို့စ်လေး အတွက်လည်း ကျေးဇူးပါ အစ်မရေ..၊ အေးချမ်းပြီး အနားရသော ခရစ်စမတ် အားလပ်ရက်များ ဖြစ်ပါစေလို့လည်း ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ဗျာ...။
မ ရေ. အိမ်ကသားတော့ ရ နှစ်လောက်ကစပြီး ဘာသာတရားတွေကို သူသိသလောက် လိုက်လေ့လာပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာက လက်တွေ့ ကျတယ် တရားတော်တွေက အမှန်တရားတွေဆိုပြီး သူ့ သဘောလေးနဲ့ သူ ကိုးကွယ်ယုံကြည်သွားတာ. တခြားဘာသာတွေအကြောင်းလဲ သူတတ်သလောက်လေ့လာလိုက်တာ တချို့ တွေ ကိုယ်တောင်မသိဘူးရယ်. မြန်မာပြည်ပြန်တုန်းက ဘာသာရေးရုပ်ပြစာအုပ်လေးတွေ ဖတ်ပစ်လိုက်တာ ၂ပတ်အတွင်း ၈အုပ်ပြီးသွားလို့အံ့ရော မ ရေ. စာတွေပြန်ရေးပါ မ ရယ်.
အစ်မ ဘလော့ ပြန်ရေးတာ ဝမ်းသာလိုက်တာ .. ။
Win Zin Min Raja said...